HAZAKAZA-PIARAKODIA : Fahombiazana tanteraka ny Gymkhana andiany voalohany
Fiarakodia miisa 19 no nandray anjara tamin’ny Gymkhana, natao teny amin’ny Bord, ny sabotsy tontolo andro teo. 18 avril 2017
Ny fikambanana Go Janga no nikarakara ny hetsika Mahajanga mifety ka anisan’izany ny Gymkhana sy fampirantiana fiara tranainy.
Betsaka ireo mpitia fiarakodia no nandray anjara, ka anisan’izany ny an’ny Ben’ny tanànan’i Mahajangan izay nahazo ny laharana fahavalo teo amin’ny fotoana vita, niaraka tamin’ny Hyundai 4x4. Mini Cooper nentin’i Haja kosa no nahazo ny laharana voalohany tamin’ny fe-potoana 2 minitra 11 segaondra 18. I Nanou mbola niaraka tamin’ny Mini cooper ihany no nahazo ny faharoa tamin’ny fotoana 2 minitra 13 segondra 13.
I Michel nitondra ny Peugeot 505 kosa no nahazo ny laharana fahatelo tamin’ny fotoana 2 minitra 16 segaondra 56. Vehivavy roa koa no nandray anjara dia i Taly tamin’ny peugeot 307 sy tamin’ny quad. Fiara tsy mataho-dalana telo koa no nifaninana, ka ankoatra ny ny fiaran’i Mokhtar dia nisy koa ny fiara marika Mazda b2200 sy Samouraï. Nizara roa ny lalao, ka nisy ny natao ny maraina ary nisy koa natao tamin’ny tolakandro.
Nahazo fankasitrahana tamin’ny mpijery iny hetsika iny. Nanamafy izany ny Ben’ny tanàna izay nisaotra ny mpikarakara. « Mbola kely aho no nahenoako izany Gymkhana izany farany teto Mahajanga » hoy izy. Noho ny fahombiazan’ ny hetsika dia efa misy sahady vina hikarakarana hetsika hafa amin’ny fanatanjahantena amin’ny fiarakodia amin’ny volana jolay izao... Na dia sambany aza ny hetsika dia nampiseho fahamatorana ny mpikarakara ka voafehy tanteraka ny tsy fiarovana tamin’ny loza ho an’ny mpijery.
Nisy koa ny fanomezana zana-bonikazo nataon’ny Go Janga ho an’ny tanànan’
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (900) 2 mars 2021 Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (451) 5 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (186) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (97) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (95) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (84) 2 mars 2021